Masinina fonosana thermoforming, masinina fonosana vacuum - Pack Utien
Utien Pack Co., Ltd. Fantatra amin'ny anarana hoe Utien Pack dia orinasa teknika mikendry ny hampivelatra ny tsipika fonosana mandeha ho azy. Ny vokatra fototra ankehitriny dia manarona vokatra marobe amin'ireo indostria samihafa toy ny sakafo, simia, elektronika, fanafody fanafody ary akora simika ao an-trano. Utien Pack dia natsangana tamin'ny taona 1994 ary lasa marika fanta-daza amin'ny fampandrosoana 20 taona. Nandray anjara tamin'ny drafitry ny fenitra nasionaly 4 an'ny milina famonosana izahay. Ho fanampin'izay, nahazo teknolojia patanty 40 mahery izahay. Ny vokatray dia novokarina ambanin'ny ISO9001: 2008 takiana fanamarinana. Manamboatra milina fonosana avo lenta izahay ary manao fiainana tsara kokoa ho an'ny rehetra mampiasa ny teknolojia fonosana azo antoka. Manolotra vahaolana izahay mba hanaovana fonosana tsara kokoa sy ho avy tsaratsara kokoa.
Niorina tamin'ny taona 1994
Mihoatra ny 25 taona niainana
Teknolojia patanty maherin'ny 40
Masinina thermoforming, ho an'ny vokatra samihafa, tsy voatery atao ny manao milina sarimihetsika henjana miaraka amin'ny MAP (Modified Atmosphere Packaging), milina sarimihetsika miovaova misy fantsona na indraindray MAP, na VSP (Vacuum Skin Packaging).
Famehezana fametahana izay mamokatra fonosana MAP na fonosana VSP avy amina fitoeran-drano efa niorina izay afaka mamonosana vokatra sakafo vaovao, mangatsiaka na mangatsiaka amin'ny vidiny isan-karazany.
Masinina vacuum no karazana milina famonosana mahazatra indrindra ho an'ny fampiharana fikirakirana sakafo sy simika. Ny masinina fanangonana vacuum dia manala oksizenina avy amin'ny fonosana ary manisy tombo-kase ilay fonosana.
Sealer ultrasonika Tube
Hafa noho ny famehezana hafanana, ny tombo-kase ultrasonika dia mampiasa teknolojia ultrasonic ahafahan'ny molekiola ambonin'ireo fantsona mifangaro miaraka amin'ny fikorontanana ultrasonic. Izy io dia manambatra ny fantsom-bozaka fantsona fiara, ny fanitsiana ny toerana, ny famenoana, ny famehezana ary ny fanapahana.
Miaraka amin'ny tsindry mafy, ny milina famonosana Compress dia manindry ny ankamaroan'ny rivotra ao anaty kitapo ary hamehezany azy avy eo. Nampiasaina be dia be izy io mba hamonosana vokatra pluffy, satria manampy tokoa ny mampihena ny habaka 50% farafaharatsiny.
Ity milina ity dia mifototra amin'ny haitao fanamafisana hafanana. Ny faneva PVC dia hafanaina amin'ny lafiny roa sy amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny tsindry ambony. Ny famehezana dia mahitsy sy malama.
Fonosana voankazo maina MAXWELL
MAXWELL, mpamokatra voankazo maina toy ny amandy, voaloboka ary jujube maina any Aostralia. Namolavola tsipika famonosana feno avy amin'ny famolavolana fonosana boribory, fandanjana fiara, famenoana fiara, fantsom-panafody sy gazy, fanapahana, firakofana amin'ny fiara ary fametahana fiara. T ...
Fonosana mofo kanadiana
Ny milina fonosana ho an'ny mpanamboatra mofo kanadiana dia mihoatra ny 700mm ny sakany ary 500mm mialoha amin'ny famolavolana. Ny habe lehibe dia mitaky fangatahana avo lenta amin'ny thermoforming sy famenoana ny masinina. Mila mahazo antoka isika fa na dia ny tsindry sy ny hery fanamafisana miorina hahatratra pac ...